Satellite Navigation Isiphumo
Iintatheli wafunda kunxulumano Chinese yeNavigeyishini satellite kunye nenkomfa endaweni ngoSeptemba 10 ukuba ishishini navigation satellite kunye nenkonzo nesikhundla China s livelise-high speed ngo-2014, ixabiso lilonke imveliso ukuya ku 134 3 billion CNY
Iintatheli wafunda kunxulumano Chinese yeNavigeyishini satellite kunye nenkomfa endaweni ngoSeptemba 10 ukuba ishishini navigation satellite kunye nenkonzo indawo eTshayina livelise-high speed ngo-2014, ixabiso lilonke imveliso ukuya ku 134.3 billion CNY, landa 29.1% ukususela ngo-2013.
Umlinganiselo Ukusetyenziswa Compass yandisa, ngaphezulu kwama-80% yeemveliso ezintsha kunye neenkqubo yokuthengisa kwimarike satellite yokukhangela zasekhaya iye yamkelwa Compass technology ehambelanayo.
Ikhutshwe kule nkomfa " Iphepha elimhlophe (2014) of China ' s navigation satellite kunye nenkonzo indawo nophuhliso loshishino " yabonisa ukuba sizukulwana Compass satellite yokukhangela lokwazisa ezimbini ezintsha ngoJulayi, inkqubo satellite navigation Compass ngakumbi ekhawulezayo isantya ngayo coverage jikelele.
I-Compass liye lasetyenziswa ngokubanzi kwi ukuhlola kunye nemephu, ukuthuthwa, okuloba Marine, amandla ombane, amandla, ezolimo kunye nezinye izifundo zobungcali, kunye imimandla yokusebenzisa mass ezifana phones smart, isithuthi navigation.
GPS kunye Compass iyahambisana kuxhaphaka ngoku ukuba isisombululo olungundoqo zobugcisa abenzi basekhaya angaphandle, kangangokuba Compass yonaniso terminal iyonke wavele ngoku kufuneka ukucaca ukusuka kwizigidi isikali, imodeli homebred kunye terminal ehambelanayo ye Compass wathengisa ngaphezulu kwe-4 million iiseti.
iphepha White kwakhona ubonisa ukuba ngo-2014, isicelo Compass iseyeyona zesiqhelo kwi endle zokuhamba. oomatshini lwezolimo kunye nesicelo eliphezulu ngqo, esweni ukhuseleko, imoto uthungelwano, IOT kunye nophuhliso isixeko ubulumko ngakumbi kwakhokelela ekukhuleni okukhawulezayo kwiimarike ezisakhulayo.
Endle isicelo yoluntu, Compass iphumelele impumelelo nesicelo imoto phambi iyalayisha, smart phones, izixhobo wearable, leyo nyangweni Compass ke ukuxuba ngokupheleleyo abantu ' ebomini s.
Kwangaxeshanye, ukuqhutywa satellite kunye nenkonzo Isikhundla kukhawuleziswe coalescing ukuya kushishino Internet, "sihlisa iteksi '' kunye 'iteksi fast" kwabangela ukunyuka ngokukhawuleza lweenkonzo ezidale ezintsha indawo-based.
Intsebenziswano yezizwe ngezizwe, i-Compass yathatyathwa ngokusemthethweni yimibutho ngamazwe waba nesatellite wesithathu lwehlabathi kunye nenkqubo esebenzayo emva US GPS kunye GLONASS Russian. Urhulumente ukukhawulezisa Compass ' inkqubo jikelele izicwangciso eneenkcukacha kunye novavanyo nophuhliso, qhubeka njalo ukuba bajikele inkqubo yehlabathi inkonzo epheleleyo ngo-2020.
Ngaphezu koko, njengoko ukwanda eshushu ka Compass, utyalo-mali omtsha ushishino kunye nenani leenkampani ezintsha ukugcina ukukhula eliphezulu. Ubungakanani navigation satellite kunye neenkonzo yendawo ezinkampani ngaphezu kwama-13, 000. Inani labasebenzi cishe 400,000. kukho 21 Iinkampani kuluhlu zibandakanyiwe kolu shishino.
Abanye lweshishini iya isiba amandla eziphambili ezintsha zoshishino, wasungula ngempumelelo imigangatho homebred aphezulu Compass chip navigation kunye lokuqala imitha ngokuchanekileyo endaweni Kwiiselula ehlabathini, oko kuya kukhokelela ukukhula ngokukhawuleza ngokuvelisa izinto ezintsha yeNavigeyishini satellite kazwelonke kunye nendawo zamashishini nkonzo China.
ixesha Post: Aug-29-2018